New in Sweden	Ku cusub Iswiidhan	قادم حديث إلى السويد	Recién llegado a Suecia	Недавно в Швеции	تازه وارد به سوئد	Tababarka Xirfadaha Iswiidhis
Khibrad ma u leedahay xirfad gaar ah? Waxaa dhici karta in aanad shaqaynba dhammaan, ama aad ka shaqaysay wax yar Iswiidhan. Koorasadayada Tababarka xirfada Iswiidhish waxaad baran doontaa Af Iswiidhiska aad u baahantahay in aad ku shaqayso xirfadaada aad dooratay, ama in ay kuu ogolaato in aad sii wadato daraasad dheeraad ah gudaha Iswiidhan. Qaybaha kooraska waxaa lagu fulin karaan goob shaqo oo lagu beddelo casharada qoraalka ah ee goobta Eductus.
SFI/Af Iswiidhishka Muhaajiriinta
Baro Af Iswiidhishka! Waxaanu bixinaa koorsooyin kala duwan oo luqadda Iswiidhishka ah. Haddii aad ku cusubtahay Iswiidhan, waxaanu bixinaa Af Iswiidhiska muhaajiriinta (SFI). Sidoo kale waxaanu bixinaa Af Iswiidhishka sidii luqad Labbaad (SAS) labbadaba mid bilow ah iyo mid heer dhexe ah.
Tabarka, bilowga ganacsi ama helida shaqo
Ma u baahantahay in aad ku darto xirfadahaaga wax si aad u hesho shaqo aad rabto ama aad u hesho koorso? Sidoo kale waxaanu bixinaa adeegyo kala duwan oo kaa caawin kara in aad gasho suuqa shaqadda ee Iswiidhan. Xagayaga waxaad wadan kartaa koorso, heli doontaa taagerada raadinta shaqada ama bilaabi doontaa shirkadaada. Nala soo xidhiidh anaga oo waxaanu kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan goobta kuu dhow. Noqo mid guul gaadha gudaha Iswiidhan!
Afka Iswiidhishka loogu talo galay dadka muhaajiriinta ah (SFI)
Koorsooyinka Af Iswiidhiska sidii Luqad Labbaad (SAS)
Tababarka xirfaddeed ee Iswiidhishka
Bilowga koorso Ganacsi
Taageero iyo ku Habboonaysiin
Ma raadinaysaa shaqo cusub ama maka fekeraysaa bilaabida kooras cusub? Markaa Taageero iyo ku Habboonaysiin (Stöd och matchning) waa adeega kaa caawin kari lahaa in aad hore u socoto. Sidii shaqo doon waxaanu ku siinaa adiga agabka kugu habboon ee aad guul ku gaadhi doonto ujeedooyinkaaga shakhsiyeed. Waxaad ka soo geli kartaa Taageerada iyo ku Habboonaysiinta xaga Eductus adoo soo maraya Arbetsförmedlingen (Adeega Shaqada ee Dad waynaha).
Ku saabsan Taageero iyo ku Habboonaysiin
Teegeero iyo ku Habboonaysiin waa qorshe lagu habboonaysiinayo baahiyaha shakhsi kasta. Iyaddoo si wada jir ah ah ay noola jiraana maamulayaashayadu waxaanu kuula nimaadnaa adiga xal. Waxaanu samaynaa baadhitaan feejigan sidii shakhsi si aanu kuugu habboonaysiini adiga shaqooyinka ama koorsooyinka aad xiisaynayso. Waxaanu isticmaalnaa agabka qiimaynta dhaqanka DISC si aanu u fududayno raadinta shaqadaada.
Maxay Taageero iyo ku Habboonysiinti ku hogaamisaa?
Shaqooyin – haddii aad raadinayso shaqo, Taageero iyo ku Habboonaysiintu waa adeega kugu habboon adiga. Maamulayaashayadu waxay leeyihiin xirfad aad u badan iyo khibrad, oo waxay yaqaanaan waxa loo baahanyahay si laguugu saaro adiga caalamka shaqada.
Waxbarashada – Haddii aad xiiso u hayso waxbarasahda, markaa daraasadayada aqoonta leh iyo la taliyayaal hagitaan ayaa diyaar u ah in ay kaa caawiyaan helida koorsada habboon.
La xidhiidhka loo shaqeeyayaasha – annaga ayaad naga heli kartaa wax ku saabsan taayada balaadhan iyo shabakada ganacsiga dhisan iyo xidhiidhada loo shaqeeyayaasha.
Yaa loogu talo galay Taageero iyo ku Habboonaysiin?
Taageero iyo ku Habboonaysiin waxaa loogu talo galay dadka raadinaayay shaqo in muddo ah. Sidoo kale waxaanu siinaa taageero dadka aan weli ku wanaagsanayn luqadda Iswiidhishka, siiba taageerada dheeraadka ah ee shakhsiyaadka u baahan.
Aqoontee hore ayaan u baahanahay?
Uma baahnid aqoon hore oo gaar ah, laakiin waa in aad ka diiwaan gashantahay Arbetsförmedlingen (Adeega Shaqada ee Dad waynaha) oo aad ku soo dhammaysataa codsigaa iyaga.
Sababteen u dooranayaa Eductus?
Waxaanu ku siinaa agabka aad u baahantahay si aad u gaadho ujeedooyin kasta oo adiga kugu habboon.
Shabakadayada balaadhan ee ganacis iyo xidhiidhada loo shaqeeyayaasha waxay ku siiyaan fursadda aad meel kaga helayso albaabka goobta shaqo ee dhabta ah.
Sagaalkiiba toban ka mid ah shaqa doonka ka qayb qaatay ayaa talo ku bixiyay adeegayaga.
Lahadal shaqaalaha kiiskaaga xaga Arbetsförmedlingen. Page editor: Web Manager
Last updated: 26 January, 2015
Ma raadinaysa shaqo cusub? Dhib ma leh haddii aanad hadda shaqayn ama aad shaqayso laakiin aad doonayso in aad u guurto tu kale, waanu ku caawin karnaa.
Afka Iswiidhishka loogu talo galay dadka muhaajiriinta ah (SFI) SFI waa Af Iswiidhishka dadka bilowga ah. Waxaad barataa Luqadda Iswiidhiska oo aad barataa sida loo akhriyo, qoro oo loogu hadlo oo waxaad fahamtaa Afka Iswiidhishka. Qaadashada Koorso SFI waxay awood kuu siinaysaa in aad dareento in aad qayb ka tahay bulshadda Iswiidhan si degdega. Tani waxay kuu ogolaan doontaa in aad horumarto si aad u kordhiso waxbarashada ama hesho shaqo. Daawo filimadayada 10 tips - Things you should know about Swedish history10 tips - how to be up and running in Sweden ASAP10 Swedish expressions you don't want to miss10 good things to know about Sweden Daawo filimadayada Eductus social media